Maamulka Jubbaland oo sheegay in uu Qaadayo Dagaal Ka Dhan Al-shabaab
Wasaaradda Amniga ee Maamulka jubba-land ayaa ku dhawaaqay in dhawaan la qaadi doono howlgalka dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab loogu saaryo deeganada ay kaga sugan yihiin Gobolka Gedo ee Koonfurta dalka Soomaliya.
Wasiirka Amniga ee Maamulka jubba-land Abrashiid Janan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ee Maamulkaas ayaa sheegay in la diyaariyay Ciidamadii xureyn lahaa deegaanada a ku sugan yihiin Al-shabaab ee Gobolka Gedo, islamarkaana loo dhameystirey qalabkii ay u baahnaayeen.
“Dhamaan Ciidamada Maamulka Jubba-land, iyo kuwa AMISOM waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan dagaal Al-shabaab loogu saarayo Gobolka Gedo,runtii dagaalka aan la galeyno Al-shabaab iyadoo ay bil ramadaan ay tahay waxaan filayaa in uu yahay mid xaq”, ayuu yiri Abrashiid Janan.
Al-shaabab ayaa ku sugan deegaano badan oo ka Tirsan ee Gobolka gedo ee Koonfurta dalka Soomaliya, iskastoo magaalada madax laga saaray sanado ka hor.
a Booqashadii Labaad ee uu ku tago Xaaf Meel ka baxsan Magaalada Cadaado oo Degaanada Galmudug ah tan iyo markii la doortay.